Beresosɛm Nhoma a Edi Kan 29:1-30
Woyii ntoboa boaa asɔrefi no si (1-9)
Dawid mpaebɔ (10-19)
Ɔman no ani gyei; Solomon ahenni (20-25)
Dawid wui (26-30)
29 Ɛnna Ɔhene Dawid ka kyerɛɛ bagua no nyinaa sɛ: “Me ba Solomon a Onyankopɔn apaw no+ no yɛ abofra a ne ho nkokwawee,*+ nanso adwuma no so, efisɛ asɔrefi* no nyɛ onipa de, na mmom Yehowa Nyankopɔn de.+ 2 Nea m’ahoɔden betumi biara, maboaboa ano asie ama me Nyankopɔn fi no; sika kɔkɔɔ a wɔde bɛyɛ sika kɔkɔɔ nnwuma, dwetɛ a wɔde bɛyɛ dwetɛ nnwuma, kɔbere a wɔde bɛyɛ kɔbere nnwuma, nnade a wɔde bɛyɛ nnade nnwuma,+ nnua a wɔde bɛyɛ nnua nnwuma;+ abohene tuntum, nhyehyem abo, abo fɛfɛ a wɔde di adwini, aboɔden abo nyinaa, ne alabasta abo pii. 3 Afei nso, me Nyankopɔn fi a m’ani gye ho nti,+ me ara mede me sika kɔkɔɔ ne me dwetɛ nso aka ho ama me Nyankopɔn fi; mede aka biribiara a maboaboa ano asie+ ama ofi kronkron no ho. 4 Nea ɛka ho ne Ofir sika kɔkɔɔ+ dwetikɛse* 3,000, ne dwetɛ a wɔayiyi mu dwetikɛse 7,000 a wɔde bedura adan no afasu ho; 5 sika kɔkɔɔ a wɔde bɛyɛ sika nnwuma, dwetɛ a wɔde bɛyɛ dwetɛ nnwuma, ne nea adwumfo de bɛyɛ wɔn nsa ano adwuma nyinaa. Afei, hena na wayi ne yam sɛ ɛnnɛ, ɔbɛkyɛ Yehowa ade?”+ 6 Ɛnna agyanom abusuafi mpanyimfo ne Israel mmusuakuw mpanyimfo ne apem apem ne ɔhaha so+ ahwɛfo ne mpanyimfo a wɔhwɛ ɔhene nnwuma so+ no yii wɔn yam de biribi bae. 7 Enti nea wɔde bɛboaa nokware Nyankopɔn fi som adwuma ni: sika kɔkɔɔ no yɛ dwetikɛse 5,000, darik* 10,000, dwetɛ no yɛ dwetikɛse 10,000, kɔbere dwetikɛse 18,000, ne dade dwetikɛse 100,000. 8 Obiara a ɔwɔ aboɔden abo no, ɔde bɛkaa Yehowa fi akorade no ho, na wɔde hyɛɛ Gersonni+ Yehiel+ nsa. 9 Ɔman no dii ahurusi sɛ wɔde ayamye afɔre bae, efisɛ koma nyinaa mu na wofi yii ntoboa maa Yehowa;+ na Ɔhene Dawid nso dii ahurusi kɛse. 10 Ɛnna Dawid hyiraa Yehowa wɔ bagua no nyinaa anim. Dawid kae sɛ: “O Yehowa, wone yɛn agya Israel Nyankopɔn; ayeyi nka wo daa daa.* 11 O Yehowa, wo na kɛseyɛ+ ne tumi+ ne anuonyam ne hyerɛn ne nidi* wɔ wo;+ na nea ɛwɔ ɔsoro ne asaase so nyinaa yɛ wo dea.+ O Yehowa, wo na ahenni wɔ wo,+ na wo nso na woakyerɛ sɛ wokorɔn sen ade nyinaa. 12 Wo nkyɛn na ahonya ne anuonyam fi,+ na wudi ade nyinaa so;+ wo na tumi ne kɛseyɛ wɔ wo nsam,+ na obiara kɛseyɛ ne n’ahoɔden wɔ wo nsam.+ 13 Afei yɛn Nyankopɔn, yɛda wo ase, na wo din a ɛwɔ anuonyam no, yeyi no ayɛ. 14 “Anka me ne hena, na me man nso yɛ dɛn a yɛanya kwan afi yɛn pɛ mu ayi ntoboa sɛɛ? Wo na ade nyinaa wɔ wo, enti nea yɛde ama wo biara, wo nsam na efi. 15 Yɛn de, yɛyɛ ahɔho ne atubrafo wɔ w’anim te sɛ yɛn agyanom nyinaa.+ Yɛn nkwa nna wɔ asaase so te sɛ sunsuma,+ na anidaso nnim. 16 O Yehowa yɛn Nyankopɔn, nneɛma bebree a yɛaboaboa ano de rebesi ofi ama wo din kronkron yi nyinaa, wo nsam na efi, na ne nyinaa wɔ wo. 17 O me Nyankopɔn, minim sɛ wohwehwɛ komam,+ na nea n’abrabɔ di mu* na ɔsɔ w’ani.+ Me de, koma a emu tew* mu na mayi me yam de nneɛma yi nyinaa aba, na wo man a wɔwɔ ha yi nso, wɔayi wɔn yam de nneɛma abɛboa ma m’ani agye aboro so. 18 O Yehowa, yɛn agyanom Abraham, Isak, ne Israel Nyankopɔn, ma adwene ne koma pa a wo man anya no ntena hɔ daa, na kyerɛ wɔn koma kwan bra wo nkyɛn.+ 19 Na me ba Solomon nso, ma no koma a edi mu,+ na onni wo mmara nsɛm,+ wo nkaesɛm, ne w’ahyɛde so; ɔnyɛ ne nyinaa na onsi asɔrefi* a maboaboa ho nneɛma ano asie no.”+ 20 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ bagua no nyinaa sɛ: “Munyi Yehowa mo Nyankopɔn ayɛ.” Na bagua no nyinaa bɔɔ wɔn mu ase de wɔn anim butubutuw fam wɔ Yehowa ne ɔhene anim, na woyii wɔn agyanom Nyankopɔn Yehowa ayɛ. 21 Ade kyee no, wɔtoaa so de nneɛma bɔɔ afɔre maa Yehowa, na wɔbɔɔ ɔhyew afɔre maa Yehowa;+ wɔde anantwinini nkumaa 1,000, adwennini 1,000, adwennini nkumaa 1,000 ne ɛho afɔrebɔ nsã;+ wɔbobɔɔ afɔre pii maa Israel nyinaa.+ 22 Saa da no, wɔde anigye kɛse didi nomee wɔ Yehowa anim,+ ɛnna wɔsan sii Dawid ba Solomon hene, na wɔsraa no sɛ ɔkannifo+ wɔ Yehowa anim, na Sadok nso, wɔhyɛɛ no sɔfo.+ 23 Ɛnna Solomon dii ne papa Dawid ade, na ɔtenaa Yehowa ahengua so+ dii hene; esii no yiye, na Israelfo nyinaa yɛɛ osetie maa no. 24 Mpanyimfo+ ne akatakyi+ no ne Ɔhene Dawid mma no nyinaa+ nso brɛɛ wɔn ho ase maa Ɔhene Solomon. 25 Na Yehowa maa Solomon yɛɛ kɛse paa wɔ Israel nyinaa ani so, na ɔma onyaa anuonyam n’ahenni mu, na ahemfo a wodii n’anim bae mu biara annya bi saa wɔ Israel.+ 26 Enti Yese ba Dawid dii Israel nyinaa so hene, 27 na mfe* dodow a ɔde dii Israel so hene no si mfe 40. Ɔtenaa Hebron dii ade mfe 7,+ na ɔtenaa Yerusalem nso dii ade mfe 33.+ 28 Onyin bɔɔ akwakoraa,+ na odii nna mee ansa na ɔrewu; onyaa ahonyade ne anuonyam pii, na ne ba Solomon bedii n’ade.+ 29 Ɔhene Dawid ho nsɛm nyinaa, efi mfiase kosi awiei, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ ɔdehwɛfo Samuel, odiyifo Natan,+ ne ɔdehufo Gad+ nsɛm no mu; 30 nsɛm a ɛwom no bi nso ne n’ahenni ho nsɛm nyinaa, ne kɛseyɛ, nsɛm a esisii ne bere so, ne nea esisii Israel ne ahenni a atwa ne ho ahyia nyinaa mu.
^ Anaa “ɔyɛ mmerɛw.”
^ Anaa “abankɛse; fikɛse.”
^ Anaa “mmaninyɛ.”
^ Anaa “ɔnantew trenee mu; ɔnantew teeyɛ mu.”
^ Anaa “komam teeyɛ.”